महन्थ ठाकुरको कदमले माओवादीमा रुवाबासी, संसदमै ठाकुरका अगाडि रो'ए माओवादी सांसद ! - Rising Dainik
April 8, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on महन्थ ठाकुरको कदमले माओवादीमा रुवाबासी, संसदमै ठाकुरका अगाडि रो’ए माओवादी सांसद !
काठमाडौं। जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माग सम्बोधन गरे सत्ता सहकार्य गर्न पनि तयार भएपछि माओवादी केन्द्रमा रुवाबासी भएको छ।
जसपाको बहुमत टिम ओलीतिर लाग्दा माओवादीले चाहेजस्तो विपक्षीको गठबन्धन बन्ने छैन । यो बन्न नदिन ओलीले मधेसका मु’द्दा समाधानमा ग’म्भीरतापूर्वक चासो देखाएका छन् । यस्तो बेला ठाकुर अन्तर्वार्तामा पनि कांग्रेस र माओवादीवि’रुद्ध आ’क्रामक र प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नरम देखिएका छन् । आफ्नै दलका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई प्रति पनि ठाकुर आ’क्रामक देखिन्छन्।
उनको आ’क्रामकताले माओवादी केन्द्रलाई ठहरै पारेको छ । यसको दृश्य बिहीवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखियो । बैठक शून्य समयमा माओवादी केन्द्रका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले ठाकुरको नाम नै लिँदै हा’रगु’हार गरे।
ति सांसद हुन् सुरेशचन्द्र दास । उनले सर्वोच्च न्यायलय र जनताबाट पुरस्कृत ओली सरकारको विकल्प नहुनु दु’र्रभाग्यपुर्ण र रहस्यमय रहेको बताए । महन्थ ठाकुरले दिएको एक अन्तर्वार्तामा सरकार निर्माणमा कांग्रेस माओवादी क्लियर छैन भनेर अभिव्यक्ति दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दे उनले भने, ‘म ठाकुरजीसंग सोध्न चाहन्छु कि आज मधेसका जनताहरु संघीयता वि’रोधी सरकारमा जान चाहँदैन । संघीयता र गणतन्त्रवि’रोधी सरकारमा जान चाहदैन।’
उनले आफ्नो पार्टीको स्वार्थका लागि मधेसी जनताको नाम लिएर इमोसनल ब्याकमेल संसदमा गर्न खोजे। तर सबैको नाडी छामेर बसेका ठाकुरका लागि यो ठूलो कुरो होइन । तर यसले माओवादीभित्र महन्थप्रति भयंकर भय भने रहेको देखाउँछ।
दमदार निर्णय गरेर हिरो बन्ने तरखरमा चोलेन्द्र !
पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि बेहोस, ३ घन्टाभित्र मृ’त्यु
अनुहार चम्काउने यस्ता छन् ११ घरेलु उपाय, घरमै चम्काउन सकिन्छ अनुहार